Yini ongayibona edolobheni laseFrance iMarseille | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona eMarseille
IMarseille iyidolobha elihle eliyitheku eseningizimu yeFrance. Kungokwesifunda seProvence-Alpes-Côte d'Azur. Leli yidolobha lesibili elinabantu abaningi eFrance ngemuva kweParis, okwenza kube idolobha eliphithizelayo futhi elijabulisayo. Futhi iyichweba lezentengiselwano elibaluleke kakhulu eFrance futhi kulezi zinsuku idolobha elibukeka kakhulu elinikeza inani elingenamkhawulo lezindawo ezinhle.
Yize kuyiqiniso ukuthi eminye imidlalo yokuhlunga ibilokhu ihlotshaniswa neMarseille iminyaka, leli dolobha likhombise ukuba yindawo ekahle yezokuvakasha, i-gastronomy, izindawo zayo zomlando nohlamvu lwayo. Ngokungangabazeki indawo ekahle yokuphumula kwezinsuku ezimbalwa ezosivumela ukuba sazi leli dolobha laseFrance.
1 IVieux Port noma iPort Old
2 ICathhedral yeMajor
3 I-Notre Dame de la Garde basilica
4 Abbey kaSanta Victor
6 I-Fort Saint Jean
7 Hamba phansi eCorniche
IVieux Port noma iPort Old
Itheku Elidala lingenye ye- izindawo eziyinhloko okufanele sizibone eMarseille ngezikhathi ezehlukene zosuku. Leli chweba lalingenye yezinto ezibaluleke kakhulu eMedithera kusukela ngesikhathi samaGrikhi futhi kuseyindawo enesisindo esiningi sokuhweba, yize ngokuyinhloko kuyimarina. Okokuqala ekuseni kungenzeka ukubona abadobi bethengisa izinhlanzi ezintsha kusuka ekubanjweni kokuqala kosuku, into ehlala iheha futhi iheha uma sivela ngaphakathi. Ntambama kuyindawo ekahle yokunambitha i-gastronomy enezitsha zokudla ezimnandi futhi ube nesiphuzo esiqabulayo. Kule ndawo kugcinwe imihlangano yokufundisana emidala kanye nehholo ledolobha.
Le cathedral ine- Isitayela esiphefumulelwe saseByzantium Futhi yingakho ingeyasekuqaleni impela eFrance, ngoba ayifani namanye amasonto ababhishobhi aphefumulelwe yiRomanesque noma amaGothic. Isonto lombhishobhi lihle impela futhi ngeke silibone linjengalo ezweni lonke, ngakho-ke ukuvakasha kuyisidingo. Ine-limestone enemibala emibili, eyenza ibukeke njenge-mosaic. Ibuye ibe nezindlu ezinkulu. Ngaphakathi kunomhlobiso ocebile onemabula nobuciko bokubumba. Ungavakashela ngaphakathi buthule ukujabulela lo msebenzi ohluke kakhulu kunamasonto ababhishobhi esiwajwayele eYurophu.
Lesi sisekelo se I-Lady of the Guard yethu isukela ngekhulu le-XNUMX futhi inesitayela seNeo-Byzantine esisikhumbuza kancane ngekhulu lokuqala laseMarseille, yize ngenye indlela. Lokhu kuthintwa kweByzantine kungabonakala kulezi zakhiwo zenkolo edolobheni, okukhombisa ukuthi ezentengiselwano ezedlule ezaletha amathonya amaningi edolobheni. Leli basilica futhi lingenhla kogu lolwandle futhi linemibono emihle kakhulu yedolobha nokushona kwelanga, ngakho-ke ukuvakasha okufanele kwenziwe.
Nini Ake sivakashele i-Abbey yaseSan Victor Kufanele sazi ukuthi siphambi kwesinye sezakhiwo ezindala kakhulu edolobheni. Kwakungesinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu zenkolo kulo lonke elaseFrance eseningizimu, esasungulwa ngekhulu lesi-XNUMX. Sinemibhoshongo emikhulu futhi ngaphakathi siyakwazi ukubona izinsalela nendawo ye-crypt. Eduze kwale ndawo yokubekisa kukhona futhi iFour des Navettes, okuyindawo ekubhakwa kuyo endala kunazo zonke edolobheni, lapho ungathenga khona amakhukhi amahle kakhulu.
Lokhu kungenye ye izindawo ezithakazelisa kakhulu ezungeze iMarseille, isifunda esidala sokudoba namuhla esinendawo yesimanje nokunye. Yindawo endala yedolobha futhi kuyo singabona imigwaqo emincane, izikwele kanye nezakhiwo ezinhle ezinomoya othize owonakele okwenza le ndawo ikhetheke kakhulu. Kule ndawo kunobuciko obuningi basemadolobheni, obunemidwebo eminingi ezosimangaza lapho sisendleleni. Izindawo okufanele ubonwe kuzo njengePeace de Lenche, Place des Moulins noma iGrande Savonnerie, indawo lapho ungathenga khona insipho eyiqiniso nedumile yaseMarseille.
Este izinqaba kumi emnyango weTheku Elidala futhi kungukwakhiwa okudala obekuvumela ukuvikela indawo ethekwini, okwakhiwa ngekhulu leshumi nesikhombisa, yize kwagcina ezinye izakhiwo ezazikhona. Le ndawo yayingagcini ngokuzivikela, kepha futhi yayisebenza njengejele noma ikamu, ngakho-ke kunendaba enkulu ngemuva kwayo. Le nqaba ixhunywe ngumgwaqo wokuqala wensimbi oya eMnyuziyamu Yezimpucuko zaseYurophu naseMedithera.
Hamba phansi eCorniche
ICorniche iyi ukuhamba cishe amakhilomitha amane ukusuka ePlaya de los Catalanes uye olwandle iParque du Prado. Kuyindlela enhle kakhulu enamaphuzu athile athakazelisayo njengeVilla Valmer noma iChateau Berger. Ukusuka lapha uthola nemibono emihle ngeCastle of If. Le nqaba isesiqhingini esisethekwini laseMarseille futhi nayo ingavakashelwa. Le ndawo yaba ugqozi ku-Alexander Dumas ukubhala incwadi yakhe ethi 'The Count of Monte Cristo'.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Yini ongayibona eMarseille
Yini ongayibona eZurich
Yini ongayibona eLyon